साक्षी बसेकाको दम्पत्ति मारिँदा
राजविराज, १० साउन । सप्तरीको जण्डोल-२ मा एक दम्पतिको हत्याको कारण उनीहरू एउटा घटनाका प्रत्यक्षदर्शी भएकाले हो भन्ने निश्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ । २०६९ पुस १७ मा ३६ वर्षीय डम्बर भट्टराई र उनकी पत्नी...
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनामा प्रवर्द्धककै बेइमानी
काठमाडौं, ९ साउन । सरकारसँग विभिन्न माग र सर्त राख्दै आएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवर्द्धक भारतीय जिएमआर कम्पनी नै पिडिए (आयोजना विकास सम्झौता) गर्न तयार नरहेको खुलेको छ। उक्त आयोजना लगानी बोर्डमातहत आएपछि...
विराटनगर, ९ साउन । विराटनगरको दुईतले कोइराला निवासको तल्लो तलामा एउटा कोठा यस्तो छ, जहाँ पुराना सामान धुलो जमेर बसेको छ। कति किताब छन्, कीराले पत्रपत्र खाइसकेका। कति पुराना बाकस छन्, ठाउँठाउँमा धमिरा लाग्दै...
हङकङ, ९ साउन । तिब्बतको सिगात्से आइपुगेको रेलमार्ग छ वर्षभित्र नेपालको सिमा क्षेत्र केरुङ जोडिने भएको छ। मंगलबार १४ औँ ट्रयाकको परीक्षणपछि ल्हासा–सिगात्से रेलमार्ग निर्माण पूरा भएको भन्दै २०२० भित्र यसलाई नेपाल, भारत र...
कहाँ जान्छन् सभासद् ? रित्तै हुन्छन् संसदका कुर्सी
काठमाडौं, ९ साउन । नयाँ संविधान जारी भएपछि बन्‍ने संसद्‌मा माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा र तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा नै हुने भएका छन्। अघिल्लो संविधानसभाको संवैधानिक समितिले गरेको यससम्बन्धी निर्णयलाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिले बिहीबार...
काठमाडौं, ९ साउन । सरकारले बजेट भाग दुईको रातो किताब प्रकाशन गर्न नसक्दा संसदमा बिहीबार बजेट छलफल अघि बढ्न सकेन । स्थानीय विकास योजना भाग दुईको रातो किताब उपलब्ध नभएका कारण सभामुख सुवास नेम्बाङले...
काठमाडौं, ९ साउन । एमाओवादीले संविधान निर्माणबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा बनाउन गृहकार्य थालेको छ । उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको संयोजकत्वमा ‘संविधान सुझाव मस्यौदा तथा समन्वय समिति’ गठन गरी बिहीबारदेखि काम सुरु गरिएको हो । संविधानसभामा...
टियुको ट्रान्सक्रिप्टमा लापरबाही
काठमाडौं, ८ साउन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा ट्रान्सक्रिप्ट लिन आउने विद्यार्थीले कर्मचारीको लापरबाहीका कारण सास्ती खेप्नुपरेको छ। विद्यार्थीले ट्रान्सक्रिप्ट लिन फारम भरेर तीन सय रुपैयाँ राजस्व तिर्नुपर्छ। फरम भर्दा विद्यार्थीले परीक्षा...
विद्यार्थीलाई हजारपटक उठबस !
काठमाडौं, ८ साउन । चपलीस्थित स्नोल्यान्ड रेनग लाइट अफ एजुकेसन स्कुलका प्राचार्य कृष्ण लामासहितका विद्यालय सञ्चालकले कक्षा १० का विद्यार्थीलाई चरमयातना दिएका छन्। विद्यालयभित्र रहेको प्राचार्य लामाको मोटरसाइकलमा मंगलबार चोर लेखिएको देखेपछि रिसले चुर...
बनेपा, ८ साउन । बोधिचित्त (बोलीचालीमा बुद्धचित्त) को खेती गर्ने किसान प्रहरी र लुटेराको दोहोरो मारमा परेका छन्। प्रतिमाला ५ हजारदेखि ५ लाखसम्म बिक्री हुने बोधिचित्त जोगाउन उनीहरू रातभरि बोटमुनि नै सुत्ने गरेका छन्।...
प्रधानमन्त्री पूर्ण आराममा
काठमाडौं, ८ साउन । फोक्सोको क्यान्सरको उपचार गराएर मंगलबार स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला आरामका लागि बुधबार दिनभर निवासमै बसे । उनले पार्टी नेता, मन्त्री र सहयोगी कसैसित पनि भेटघाट गरेनन् । ‘क्यान्सर उपचारका...
काठमाडौं, ८ साउन । पर्यटकीय हिसाबले महत्व बोकेको गोदावरी क्षेत्रमा स्थानिय सहकारी संस्थाले केवलबार निर्माण गर्ने भएको छ । सिद्देश्वर पर्यटन सहकारी संस्थाले ५० प्रतिशत बैंक ऋण र ५० प्रतिशत आफ्नो लगानीमा २ दशमलब...
« 1 … 1,154 1,155 1,156 1,157 1,158 … 1,202 »